စေတနာကမ်းလက်များ > ရွှေပါရမီကျန်းမာရေးဖောင်ဒေးရှင်း
1. ၇ရက်သားသမီး တစ်ပတ်စာဟောစာတမ်း(၁၅-၇-၂၀၁၈) မှ (၂၁-၇-၂၀၁၈)
2. ဇူလိုင်လ ၁၅ရက်နေ့အတွက် ၇ရက်သားသမီးဗေဒင်
3. ဇူလိုင်လ ၁၅ရက်နေ့အတွက် ရာသီခွင်အလိုက်ဗေဒင်ဟောစာတမ်း
2. DIA holds media showcase for new album
3. ပရိသတ်အယောက် (2500) တက်ရောက်ခဲ့ကြသည့် 2017 SXSW ၏ K-pop ည: Seoul အေဂျင်စီ
1. စပါယ်သရှယ်လစ်စ် - Chapter 1
2. တိရိစ္ဆာန် သုဘရာဇာ - အစ/အဆုံး
3. တက္ကသိုလ်နောက်ခံ ဗယာကြော်ဇာတ်လမ်း - အစ/အဆုံး
အစီစဉ် အမှတ် : 1004
ရွှေပါရမီကျန်းမာရေးဖောင်ဒေးရှင်း၏ (၃၈)ကြိမ်မြောက် ဆေးကုသမှုအလှူတော်ကို တနင်္သာရီတိုင်း၊ ထားဝယ်ခရိုင်၊ သရက်ချောင်းမြို့ကို အခြေပြု၍ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလတွင် ကုသပေးရန် စီစဉ် ထားပါသည်။ မျက်စိ၊ နား၊ နှာခေါင်း၊ လည်ချောင်း၊ အထွေထွေ သားဖွားမီးယပ်၊ အရိုးကြော၊ ကလေး သွားနှင့်ခံတွင်း၊ အရေပြား၊ အထွေထွေခွဲမှုများ ကုသပေးပါမည်ဖြစ်ပါသည်။ အလှူအတွက် ကုန်ကျငွေ ကျပ်သိန်း (၅၀၀)ကျော်မည်ဟု ခန့်မှန်းထားရှိပါသည်။
ပဓာနနာယက ဆရာတော်အရှင်ဆန္ဒာဓိက(ရွှေပါရမီတောရဆရာတော်)မှ လမ်းညွှန်ဦးဆောင်၍ ဥက္ကဌဦးရှိန်ဝင်းဦးစီးသည့်အမှုဆောင်အဖွဲ့(၁၃)ဦးဖြင့်ဆောင်ရွက်ပါသည်။ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ၁၂-၅-၂၀၁၄ အသင်းအဖွဲ့မှတ်ပုံတင်အမှတ်(၂၂၁၃)ဖြင့် မှတ်ပုံတင် ခွင့်ပြုထားပါသည်။နယ်လှည့်ဆေးကုသခြင်းကိုကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၏ခွင့်ပြုချက်ရယူပြီး တိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပြည်နယ်အစိုးရတို့၏လမ်းညွှန်ပံ့ပိုးမှုဖြင့်ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါသည်။
-မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းနယ် မြို့များနှင့်ကျေးလက်ဒေသများရောဂါဝေဒနာရှင်များကိုလူမျိုးမရွေး ဘာသာမရွေး မေတ္တာဖြင့်အခမဲ့ဆေးဝါးကုသပေးရန်နှင့် ရန်ကုန်မြို့တွင်ဆက်လက်ကုသရန် လိုအပ်သည့်ဝေဒနာရှင်များ ကို ကျန်းမာရေးပညာရှင်များနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်၍ ပြည်သူများ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု လိုအပ် ချက်ကိုတစ်ဖက်တစ်လမ်းမှ ပါဝင်ဖြည့်ဆည်းပေးရန် ဖြစ်ပါသည်။